Free Thinker: စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းအကြောင်း (၁)
တကယ်ဆို စင်ကာပူမှာအိမ်ဝယ်တာ ဘာမှမဆန်းတော့ပါ။ လူများတကာတွေ အိမ်တွေ ၀ယ်ကြ၊ လက်ရှိ အိမ်ကို ပြန်ရောင်းပြီး ပိုကောင်းသောအိမ်ကို ၀ယ်ကြ လုပ်နေတာ ကာလအတန်ကြာကပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာသာ ခုမှ အတင်းဖျစ်ညှစ်ပြီး ၀ယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အိမ်ဝယ်ရန် ချောင်းနေသူများ၊ ၀ယ်ရန် အစီအစဉ်ဆွဲနေသူများ၊ ၀ယ်ပင်မ၀ယ်ငြားသော်လည်း စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းအကြောင်း ဗဟုသုတအနေနှင့် သိလိုသူများအတွက် ယခု ကျွန်တော်အိမ်ဝယ်သည့် အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပါမည်။ အနာဂတ်တစ်ခု ဖန်တီးတည်ဆောက်ခြင်းတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းအကြောင်း အတော်အတန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခု လက်တွေ့မှရသော ဗဟုသုတနှင့်ပေါင်းစပ်ကာ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ရေးသားပါမည်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် အတော်ရှည်ပါလိမ့်မည်။ သိလိုသမျှသာ ရွေးဖတ်ပါ။ သိပြီးသူများအနေနှင့် ဖတ်ရန်မလိုပါ ခင်ဗျား။
(၁) ကျွန်ုပ် အတွက်လွဲခြင်း
သေသေချာချာပြန်တွက်ကြည့်မည်ဆိုပါက စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်းကို ၀ယ်သည်ဟုပင် မခေါ်နိုင်ပါ။ HDB မှ နှစ်ရှည် ငှားနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သည်အိမ်များကို HDB (Housing Development Board) ကပိုင်သည်။ မြေကြီးကိုတော့ SLA (Singapore Land Authority) ကပိုင်သည်။ သူတို့က လူတစ်ဦး၏ သက်တမ်းကို ၉၉ နှစ်ပဲ သတ်မှတ်ထားသည်လားမသိ။ အိမ်တစ်လုံး၏ သက်တမ်းကို ၉၉ နှစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယခု ကျွန်တော်က ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်ကို ၀ယ်လိုက်သည်။ အိမ်၏ သက်တမ်းမှာ ၁၀ နှစ်ရှိသွားပြီ။ ထို့အတွက် ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင်ကျန်သော အိမ်၏ သက်တမ်းမှာ ၈၉ နှစ်ဖြစ်သည်။ သည်အိမ်ကို ကျွန်တော်က ၈၉ နှစ်နေရန် ပိုက်ဆံတစ်လုံးတစ်ခဲထဲ အပြတ်ပေးပြီး ငှားလိုက်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ သို့သော် သာမန်ငှားခြင်းနှင့် ဘာကွာသနည်းဆိုတော့ သည်အိမ်ကို ကိုယ်က ပြန်ရောင်းလို့ရခြင်း ဖြစ်၏။ သို့သော် နောက်အိမ်ပိုင်ရှင်မှာလည်း အငှားသဘောသာဖြစ်ပြီး မူလပိုင်ရှင်မှာမူ HDB သာဖြစ်သတည်း။
သို့ဖြစ်သဖြင့် သည်အိမ်ကိုပြင်ချင် ဆင်ချင်ပြီဆိုပါက HDB သို့စာတင်ရသည်။ သည်အိမ်တွင် လူငှားတင် ချင်တယ်ဆိုလျှင် HDB သို့စာတင်ရသည်။ ငှားလို့ရသည့်ပိုက်ဆံကို အပိုဝင်ငွေအဖြစ် ၀င်ငွေခွန်ဆောင်သည့်အခါ ထည့်သွင်းတင်ပြရသည်။ ကိုယ့်အိမ်တန်ကြေးကို သူတို့က လာဖြတ်ပေးသည်။
အမှန်ဆိုရလျှင် ကျွန်တော်၏ မိုက်မဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆ သောင်းကျော်နစ်နာသွား ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိမ်ဝယ်ဘို့မနှစ်ကတည်းက ရည်ရွယ်ရင်းရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ မတ်လတွင် အေးဂျင့် လုပ်သူက စာရွက်စာတမ်းများကိုင်ကာပင် ရောက်လာပြီ။ ကျွန်တော်က အိအ၊ ကွိကွလုပ်နေသဖြင့် မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့။ အိမ်ဈေးကလေးများ ကျလေမလား။ ပိုက်ဆံလေးများ ပိုတက်လာလေမလား မျှော်ကိုးကာ အချိန်ဆွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် အခြေအနေက ကိုယ်မျှော်မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့။ အိမ်ဈေးများမှာ တရိပ်ရိပ်တက်သွားသလို အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာလည်း တရိပ်ရိပ်ထိုးဆင်းသွားလေရာ ကျွန်တော့်မှာ ငွေများစွာနစ်နာခဲ့ရသည်။ မနှစ်က အိမ်မ၀ယ်ဖြစ်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းထဲ ပိုက်ဆံကို ခဏထည့်ထားလိုက်သည်။ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလက။ ထိုအချိန်က ပိုက်ဆံဈေးမှာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁.၃၂၉ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ကျွန်တော် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈သောင်းခွဲ (စင်ကာပူဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော်) ချေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လကုန်တွင် ပြန်ပေး။ သည်သို့ချေးခြင်းအတွက် ကျွန်တော်က ချေးငွေ၏ ၃% ကို ကော်မရှင်ယူမည်။ ဒါကို နှစ်ဦး နှစ်ဖက် သဘောတူသည်။
၂၀၁၁ ဇူလိုင်လကုန် သူပြန်ဆပ်တော့ ပိုက်ဆံဈေးမှာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁.၂၂ သာရှိတော့သည်။ သူမြန်မာပြည်ဘက်ကပြန်လွဲတော့ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာလျှင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁.၂၁ သာ ရသည်။ သည်တွင် ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးရတော့၏။ သူယူတုံးက အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ယူပြီး ပြန်ပေးတော့လည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာပြန်ပေးတာ သဘာဝကျပါသည်။ သို့သော် ပိုက်ဆံဈေးများ အဆမတန်ထိုးကျသွားသဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာကို စင်ကာပူဒေါ်လာလဲ ပြန်လဲလိုက်ရော (ကော်မရှင်ပါထည့်တွက်တာတောင်) စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကျော် ရှုံးသွားသည်။ သည်တော့ သူငယ်ချင်းသို့ ငိုပြရသည်။ တော်ပါသေး၏။ သူတော်ကောင်းနှင့် တွေ့ပေလို့။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက မပူပါနဲ့ကွာ၊ ငါတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ဟု ဆို၏။ မောင်မင်းကြီးသား ဘုန်းကြီးပါစေ။ သက်ရှည်ပါစေ။ အနာမျိုး ၉၆ ပါးကင်းပါစေ။
ဤသို့အတွက်မှားမှုများကြောင့် မူရင်း အိမ်ဝယ်ဘို့ငွေ တစ်လုံးထည်း ချေးရသည့်ပြင် ဟိုနားသည်နားလည်း ပြေးပြီးချေးလိုက်ရချေသေး၏။
(၂) စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်း အကျဉ်း
စာရှည်ရှည်ဖတ်ရမှာ ပျင်းသူများအတွက် အတိုချုံးပြောပြပါမည်။ ဘာမှမခက်ပါ။ အေးဂျင့်နှင့်ဝယ်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အေးဂျင့်လုပ်ခိုင်းတာ လိုက်လုပ်သွားရုံဖြစ်ပါသည်။
၁။ အိမ်ဝယ်တော့မည်ဆိုတော့ လက်ရှိအိမ်ပိုင်မရှိကြောင်း သက်သေပြရသည်။ ဤသည်မှာလည်း ဘာမှမခက်ပါ။ HDB website တွင် မိမိ IC No. ရိုက်ထည့်ကာ print out လုပ်လိုက်ရုံဖြစ်ပါသည်။
၂။ နောက်ပြီး မိမိဘတ်ဂျက်နှင့် တွက်ဆကာ သင့်တော်မည့်အိမ် လိုက်ရှာရသည်။ နှစ်ရှည်လများအတွက် စဉ်းစား ရတာဆိုတော့ သေသေချာချာရွေးရသည်။
၃။ အိမ်ရပြီဆိုတော့ မိမိလက်ထဲတွင်ရှိသောပိုက်ဆံနှင့် အိမ်ဘိုးချေရမည့်ငွေကို ချင့်ချိန်ကာ ဘဏ်မှငွေချေးရသည်။ ဒါလည်း အေးဂျင့်ကပင် လိုက်လုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ မိမိက လက်မှတ်သာ လှိုင်လှိုင်ထိုးပေးဘို့ပြင်ထားပါ။
၄။ အကယ်၍ မိမိဇနီး/ခင်ပွန်းသည် သည် စင်ကာပူတွင်မရှိပါက သို့မဟုတ် ကြာရှည်မနေနိုင်ပါက ရှေ့နေကို လွှဲလို့ ရသည်။ ကိုယ်က special power ပေးလိုက်လျှင် ရှေ့နေက သူ့ဟာသူ ကြည့်လုပ်သွားလိမ့်မည်။
၅။ နောက် ရောင်းမည့်သူ နှင့် ၀ယ်မည့်သူ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကာ Option to Purchase လုပ်ရသည်။ (မြန်မာလို ပြောရလျှင် စရံပေးတာဖြစ်ပါ၏။) ဤပွဲတွင် အေးဂျင့်က သည်အိမ်မည်မျှတန်ကြောင်း ရာဖြတ်ကဆုံးဖြတ်ပေးထား သောစာ (valuation report) ကိုယူလာသည်။ ရောင်းသူက အိမ်ကို ပြင်ထားသည် ဘာညာ အကြောင်းကြောင်းဖြင့် ထို တန်ရာတန်ကြေးအပြင် အပိုကြေး (COV – Cash Over Value) ထပ်တောင်းသည်။ valuation က ဈေးဆစ်လို့ မရ။ COV ကတော့ အိမ်ရှင်က သူ့သဘောနှင့်သူ တောင်းတာဖြစ်သည့်အတွက် ဈေးဆစ်လို့ရသည်။
၆။ OTP လုပ်လျှင် စရံငွေ ၁၀၀၀ ပေးရသည်။ နောက်၁၄ရက်အတွင်း exercise လုပ်ရသည်။ နောက်ထပ် ငွေ ၄၀၀၀ ထပ်ပေးရခြင်းကို ခေါ်၏။ အဘယ်ကြောင့် ဤကဲ့သို့ခွဲထားရသနည်း ဟူမူ ရောင်းသူဘက်ကသော်လည်းကောင်း၊ ၀ယ်သူဘက်ကသော်လည်းကောင်း မရောင်း / မ၀ယ်လိုပါက ဖျက်လိုလျှင် ဖျက်နိုင်အောင် နည်းနည်း အချိန် ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
၇။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ အိမ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ကို HDB တွင် တင်ခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသို့တင်သောအခါ တစ်လခန့်ခွာပြီး HDB က First Appointment ရက်ချိန်းပေးပါသည်။ First Appoinment ရက်တွင် ရောင်းသူရော ၀ယ်သူပါ (လင်မယား နှစ်ဦးစလုံး) တိုပါးရိုးရှိ HDB ရုံးသို့သွားပြီး လက်မှတ်ထိုးရသည်။
၈။ First Appoint နေ့တွင် လက်မှတ်ထိုးအပြီး Second Appointment ဘယ်ရက်လိုချင်သလဲ ဟု HDB officer က မေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အများဆုံး ၈ ပတ်အတွင်း မိမိအဆင်ပြေရာ တစ်နေ့နေ့ကို Second Appointment date ယူ ရသည်။
၉။ Second Appointment သို့ ရောင်းသူ၊ ၀ယ်သူ မည်သူမျှ သွားစရာမလို။ အေးဂျင့်သာ သွားပြီး လိုအပ်သည်များ လုပ်လိမ့်မည်။ Second Appointment တွင် အိမ်ကို နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပြီး ရောင်းသူမှ ၀ယ်သူသို့ အိမ်သော့အပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ အရေးကြီးသည်မှာ Second Appointment မတိုင်မီ တစ်ပတ်အလိုတွင် ငွေအကြေချေရမည်ဖြစ်ရာ ထိုရက် မတိုင်မီ သတ်မှတ်ထားသော ငွေပမာဏ လက်ထဲတွင် အဆင်သင့်ရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ထားဘို့ ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ရှာတာမပါ။ ဆောင်ရွက်ချိန် စုစုပေါင်း ၃ လလောက်ကြာသည်။
ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်အိမ်ရှာသည်။ အိမ် ၈ လုံး သတင်းပေးသည့်အနက် ၄ လုံးလိုက်ကြည့်သည်။ နောက်ဆုံး အလုံးကိုရွေးလိုက်သည်။ ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စရံသတ်(OTP) သည်။ ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် exercise လုပ်သည်။ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် First Appoinment ။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် Second Appointment ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၃ လခွဲလောက် ဆိုပါတော့။ ကြာသည်။
- မိမိတို့ဇနီးမောင်နှံ၏ IC copy
- Income Tax notice assessment
- CPF contribution history (15 months) တို့သာ ဖြစ်ပါသည်။ သည်စာရွက်စာတမ်းများမှာ ဘာမှ ခဲယဉ်းသော စာရွက်စာတမ်းများမဟုတ်။ IC နှင့် လက်ထပ်စာချုပ်က လက်ထဲတွင်ရှိပြီးသား။ Income Tax နှင့် CPF က အင်တာနက်ကနေ အချိန်မရွေး ထုတ်ယူလို့ရသည်။
အိမ်လည်းဝယ်မည်ဟု မှန်းထားသည်။ လက်ထဲတွင်လည်း down payment (ငွေသားဖြင့်ပေးရသောငွေ) အတွက် လုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်လို အိတွဲ့နှင့် နှောင့်နှေးမနေပါနှင့်။ ချက်ခြင်း ကောက်ကက်သာ ၀ယ်လိုက်ပါ။ မဟုတ်လျှင် မလိုအပ်ဘဲ ပိုက်ဆံတွေပိုကုန်သွားလိမ့်မည်။
သည်တော့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရင် အိမ်ဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်ရအောင်။
အိမ်တန်ဘိုး (valuation price) နှင့် ထပ်ဆောင်းငွေ (COV) ကို ပုံသေမှတ်ထားလို့မရပါ။ အကြောင်းအချက်များစွာ ပေါ်မူတည်၍ ကွာသွားသည်။ ထိုအချက်များထဲတွင် -
- အိမ်အကျယ်အ၀န်း (စတုရန်းမီတာနှင့် ပြသည်။ 90m2, 95m2, 100m2, 110m2 စသဖြင့် အစားစားရှိသည်။ အိမ်အကျယ်တွင် အခန်းအရေအတွက် (2 room + 1 hall =3room,3room + 1 hall =4room,4room + 1 hall =5room စသဖြင့်ဖြစ်၏။ အခန်းပါတာချင်းတူတာတောင်မှ ဆောက်သောခုနှစ်အလိုက် အကျယ်အ၀န်းကွာသွားသေးသည်။ ယခင်ကဆောက်ထားသော အိမ်ဟောင်းများမှာ ကျယ်ပြီး နောက်ဆောက်သော အိမ်သစ်များမှာ ကျဉ်းသည်။
- တည်နေရာ - ဘူတာနှင့်နီးသော၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျောင်းနှင့်နီးသော နေရာများမှာ ဈေးကြီးသည်။ မြို့ထဲနှင့်နီးသော နေရာများ ဈေးကြီးမှာ သံသယရှိစရာမလို။ Punggol လိုနေရာမျိုးမှာတော့ ဈေးသက်သာ မှာပေါ့။ သို့သော် တချို့တလေမှလွဲ၍ သည်လောက်ဝေးသောနေရာမှာနေဘို့ စိတ်ဝင်စားသူ နည်းပါလိမ့်မည်။
- နောက်ပြီး အိမ်၏ သက်တမ်း။ သိပ်နှစ်ကြာနေသော အိမ်ဟောင်း။ ဥပမာ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သော အိမ်များ။
- အိမ်ကို မည်မျှပြင်ဆင်ထားသနည်း ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်ပြီး COV ကို ဈေးခေါ်သည်။
- Ethnic Group Eligibility (ဤသည်မှာ တစ်နေရာထဲတွင် ကုလားတွေအများကြီး ပြုံမနေရန်၊ တရုတ်တွေ ချည်းစုမနေစေရန် စသဖြင့် အစိုးရက စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ရာတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်ထားသော တရုတ်ဦးရေ ပြည့်သွားပြီဆိုပါက တရုတ်များ နောက်ထပ် ဤနေရာတွင် အိမ်ဝယ်လို့မရတော့။ ဤနေရာတွင် အိမ်ဝယ်လိုသော တရုတ်တစ်ဦးသည် ဤနေရာမှ တရုတ်တစ်ဦး ထွက်အသွားကို စောင့်ရတော့မည်။ သည်လို အိမ်များလည်း ဈေးကြီးတတ်သည်။
ဆိုကြပါစို့။ အိမ်တစ်လုံး၏ valuation သည် ၃ သိန်းခွဲ ဖြစ်၏။ အိမ်ရှင်က COV ၅ သောင်းတောင်းမည် ဆိုပါက အိမ်တန်ဘိုး စုစုပေါင်းမှာ ၄ သိန်းဖြစ်သွားသည်။ ယခင်ကမူ လက်ငင်းချေရမည့်ငွေကို ၁၀% သာသတ်မှတ်ထား၏။ ယခုတော့ ၂၀% ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘဏ်မှချေးသောငွေမှာ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးမဟုတ်။ valuation ပေါ်တွင်ချေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် valuation ၃ သိန်းခွဲတန် အိမ်အတွက် ဘဏ်မှ ငွေ (အများဆုံး) ၂ သိန်း ၈သောင်း ချေးလို့ ရမည်။
လက်ငင်းချေရန် သင့်လက်ထဲတွင်ရှိရမည့် ငွေသားပမာဏမှာ -
(စုစုပေါင်းအိမ်တန်ဘိုး ၄ သိန်း - ဘဏ်ချေးငွေ ၂ သိန်း ၈ သောင်း = ၁ သိန်း ၂ သောင်း) + (တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၊ ရှေ့နေခ ဘာညာကွိကွ =၂ သောင်းလောက်) + (အေးဂျင့်ခ၊ အိမ်တန်ဘိုး၏ ၁% = ၄ ထောင်) = ခန့်မှန်း ၁၄၄၀၀၀ ဖြစ်၏။
အိမ်ဝယ်ပြီးနောက် အိမ်ပြန်ပြင်သည့်အခ၊ ပရိဘောဂများဝယ်ထည့်သည့်အခ၊ ဘာညာ သာရကာများအတွက် ၃ -၄ ထောင်လောက် ထပ်ဆောင်းထည့်ပါဦး။ သည့်အတွက် ၄ သိန်းတန်အိမ်ကို ၀ယ်လိုလျှင် လက်ထဲ၌ ၁ သိန်းခွဲခန့် ရှိထားမှ အဆင်ပြေမည်။ ၁ သိန်းခွဲအတိမဟုတ်တောင် ဤနီးနီးရှိရမည်။
(၃) အမြဲလွဲနေသော ကျွန်ုပ်
ကျွန်တော့် (၀ယ်သူ) အေးဂျင့်မှာ ကျွန်တော့်ဇနီး၏ ဦးလေးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် အိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုတော့ သူက ဘဏ်တွင်ပိုက်ဆံချေးဘို့ အရင်လုပ်သည်။ ပိုက်ဆံချေးလို့ရမယ်ဆိုတာ သေချာမှ အိမ်လိုက်ပြသည်။ သူ့ အကြံပေးမှုဖြင့် May Bank တွင် ပိုက်ဆံချေးသည်။ May Bank မှ အတိုးနှုံးမှာ လွန်စွာသက်သာလှ၏။ ပထမနှစ်တွင် အတိုးနှုံး တစ်နှစ်လျှင် ၀.၈၈% ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် ၁.၉%။ တတိယနှစ်တွင် ၂.၃%။ ၄ နှစ်နှင့်အထက် ၃.၂၅% ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်က လက်ထဲပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကို ပေသီးခေါက်ပြီး မည်မျှချေးမည်ဟု ပြောလိုက် သည်။ ဘဏ်ကို ကျွန်တော့် CPF Contribution History ၁၅ လစာ။ နောက်ပြီး မနှစ်ကဆောင်ထားသော ၀င်ငွေခွန် စာရွက် ပြရသည်။ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူပင်ချေးလို့ရပါသည်။ ကျွန်တော် ဘဏ်မှ ၇၂% ချေးလိုက်သည်။
ကျွန်တော်ရွေးလိုက်သောအိမ်မှာ Jurong Point နှင့် လမ်းဟိုဘက်သည်ဘက်။ ထောင့်ခန်းဖြစ်ပြီး အကျယ် ၁၁၀ စတုရန်းမီတာ (သူတို့အခေါ်5room) ရှိ၏။ High Floor ဖြစ်သည်။ မူလတန်ဘိုး စလုံး ၄ သိန်း ၇ သောင်း။ COV စလုံး ၃ သောင်း ၈ ထောင်။ ပေါင်းလိုက်တော့ ၅ သိန်း ၈ထောင် ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်တုံးပုံများ ဘဏ်က ချေးတာကို စုစုပေါင်းအိမ်တန်ဘိုးပေါ်မှ ချေးတာထင်ပြီး တွက်ချက်ချေးလိုက်သည်။ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းကို ချေးထားသော ငွေကို မူလပမာဏအတိုင်း တွက်လိုက်သည်။
သို့သော် ဘဏ်ကလည်း valuation price ပမာဏအပေါ်မှာပဲ ချေးသည်။ သူငယ်ချင်းဆီက ပြန်ဝင်လာသော ပိုက်ဆံမှာလည်း အဆမတန်လျော့နေသည်။ သို့အတွက် တကယ် ငွေချေတော့မယ်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံအများကြီး လိုနေ တော့၏။ သည်တော့ သွေးများတိုးလာကာ ဦးခင်မောင်တင် (အေးဂျင့်) ကို အလောသုံးဆယ်လှမ်းမေးရ၏။ သူက ဘဏ်တွင် personal loan အနေနှင့် ချေးရန် အကြံပေးသည်။
ဦးစွာ ကျွန်တော့် account များရှိသော UOB နှင့် POSB တို့သို့ ဦးစွာသွားသည်။ ပထမ UOB သို့ အရင်သွား ၏။ ပိုက်ဆံချေးဘို့ တန်းစီနေစဉ် ကျွန်တော့ အရိပ်အကဲကိုကြည့်နေသော ဘေးမှတစ်ယောက်က အချဉ်တော့ တွေ့ပြီ ဟု အနားကပ်လာ၏။
ဆရာကီး၊ ပါလုပ်မီလို့လဲ။ ငွေရှေးရှင်တာလား။
၀’ ပြောမီလေ။ စူလို့စီက ရှေးရင် ဆရာကီးရဲ့ လခ နှီဆပဲရမယ်။ လာပါ ဒီကို။ ၀’ အီဆင်ပြေအောင်
သည်လိုနှင့် ထိုတရုတ်ရှင်းပြသည်ကိုနားထောင်ပြီး သူပြောသလိုလုပ်ကာ သူပေးသော စာရွက်ပေါင်းများစွာ ကို အဆင်အခြင်ကင်းမဲ့စွာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်လေ၏။ သူက credit card နှင့်ချေးလျှင် ယခုရမည့်ငွေထက် နှစ်ဆပိုရ မည်၊ နှစ်ပတ်တော့ စောင့် ဟုဆို၏။ 15 months CPF contribution history ၊ Income Tax Statement, IC copy များ တောင်းထားလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်လည်း အေးလေ၊ ကိုရင် နှစ်ပတ်အတွင်းသာ ပိုက်ဆံရအောင်လုပ်ပေးပါ။ စောင့်တာပေါ့ ဟု ဆိုပြီး ပိုက်ဆံမည်မျှချေးလို့ရနိုင်မည်ကို မေး၏။ ဒါကတော့ သူတို့ confirm လုပ်ပြီးမှ သိမည်။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်သောင်းလောက်ရမည် ဆို၏။
သို့နှင့် POSB သို့ ဆက်ခဲ့ပြန်သည်။ POSB ကတော့ သိပ်မခဲယဉ်းလှ။ ငွေချေးချင်လို့ပါ ဟု ဆိုသည့်ခဏ လိုသည့် စာရွက်စာတမ်း (15 months CPF contribution history and Income Tax Statement, IC copy) စသည်တို့ တောင်းပြန်သည်။ (မှတ်ချက်။ CPF contribution နှင့် Income Tax statement တို့ကို သူတို့ အင်တာနက်မှနေပြီး တိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။) ပုံစံများဖြည့်၊ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တော့ နက်ဖြန် sms ဖြင့် confirm လုပ်မည်ဆို၏။ ပိုက်ဆံမည်မျှရမည်ကို မသိရ။
နောက်နေ့ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် POSB က ငွေချေးတာ confirm ဖြစ်ကြောင်း sms လာ၏။ နောက် ၅ မိနစ် ကြာလျှင် ငွေကို account အတွင်း ထည့်ပေးမည် ဆို၏။ စာအုပ်ထိုးကြည့်လိုက်တော့ ၆၆၀၀ ချေးသည်။ Admin fee 260 ဖြတ်သည်။
ဒါနှင့်မလောက်သေးသဖြင့် ANZ (Australia Newzeland Bank) ဘဏ်တွင် ထပ်ချေး၏။ Online မှ ချေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်တွင် ပလူပျံနေအောင် လှလှပပလေးကြော်ငြာထားသော်လည်း နှစ်ပတ်ကြာမှ အကြောင်းပြန်လာ၏။ ၀မ်းနည်းပါသည်။ လူကြီးမင်းကို ငွေချေးတာ မအောင်မြင်ပါ ဟု ဖြစ်၏။
သို့နှင့် OCBC သို့ ဆက်လက် ချီတက်ခဲ့ရပြန်သည်။ သူလည်း အတော်လွယ်သည်။ တစ်ရက်ပဲကြာသည်။ ငွေ တစ်သောင်း ရသည်။ admin fee ၁၀၀ ပဲယူသည်။
တစ်ပတ်ကျော်တော့ UOB က စာပို့သည်။ ငွေချေးတာ approve ဖြစ်သည်။ တစ်သောင်း နှစ်ထောင်ရသည်။ ဟွာလားဝေ။ admin fee ဟုဆိုကာ ပိုက်ဆံ ၆၈၀ ထည့်ပေါင်းထားသည်။ ရုံးမှ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကို ပြောပြတော့ ဘဏ်ဆိုတာ အနုနည်းနဲ့ ဒါးပြတိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲ ဟု ဆို၏။ နောက်ပြီး စာတိုက်မှ စာများ တဖွဲဖွဲရောက်လာသည်။ ပထမ credit card သုံးခု ပို့သည်။ နောက် password စာများပို့သည်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့ Singtel Account မှ GIRO ကို ဖြုတ်ကာ သူတို့ credit ကဒ်သို့ မဆီမဆိုင် ပြောင်းလိုက်သေးသည်။ ကျွန်တော်က credit card ကိုင်ရမှာကို မြွေပွေးခေါင်းကိုင်ရမှာထက် ကြောက်သေးသည်။ သည့်အတွက် UOB သို့သွားကာ မင်းတို့ credit card တွေ ငါတစ်ခုမှ မလိုချင်ဘူး။ အကုန် cancel လုပ်ပေးပါ ဆိုတော့ ၃ လ ကြာမှ လုပ်လို့ရမည် ဆို၏။ ကျွန်တော် အတော်စိတ်တိုသွားသည်။ ငွေချေးတုံးက စာရွက်တွေအများကြီးကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ ဒါကိုး ဟု ကျောအချခံရမှ ဒါးပြမှန်းသိသည်။
တံဆိပ်ခေါင်းဘိုး၊ ရှေ့နေခ၊ အေးဂျင့် ဘာညာကွိကွ အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ ၅ သိန်း ၃ သောင်းနီးပါး ဖြစ်သွားတော့သတည်း။
ရန်ကုန်က ယောက္ခမကြီးအိမ်ကိုရောင်း။ အဖေအမေတို့နဲ့ အတူနေခိုင်း။ ရှိသမျှအတွင်းပစ္စည်းလေးတွေ ထုခွဲရောင်းချ။ ကိုယ့်ဘို့နည်းနည်းချန်ထား။ မိန်းမဘက်က ရစရာရှိတာတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့တောင်း။ အတင်းအဓမ္မ အမွေခွဲခိုင်း။ စုဆောင်းထားသမျှလေးတွေ အကုန်ထုတ်။ မိန်းမ စိန်နားကပ်ကို စိန်တုပြောင်းတပ်။ လက်ကောက် ခုနစ်ကွင်းဆိုရင် မိန်းမကိုချော့မော့ပြီး ၆ ကွင်းလောက်ပြန်ရောင်းခိုင်း။ ဒါမှ နည်းနည်းလိုသေးရင် ကိုယ့်ကိုအလွန်ချစ်တဲ့ ဘကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးတော်ဖြစ်ဖြစ်ကို အပူကပ်။ ပိုက်ဆံပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ အိမ်ရှာဘို့ စပါတော့ခင်ဗျား။
(နောက်တာပါနော။ တော်ကြာ လာပြီးရန်တွေ့ခံနေရဦးမယ်။)
၂ သြဂုတ် ၂၀၁၁
Posted by အေးငြိမ်း at 4:34 PM
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပို့စ် ကော်မန့်မရှိတာအံ့ပါရဲ့ :D
Thanks for sharing U Aye Nyein
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသား။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိလိုက်တာ။
အိမ်ဝယ်မယ့်သူတွေ အတွက် ဗဟုသုတ ဖြစ်စေပါတယ် ဆရာ... ကျေးဇူး အထူးပါ...
UOB က ထောင်ကဲက credit card တွေ အတွက် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလား ...
၅သိန်း၃သောင်းဆိုတာ ဟိုအရင်က ကွန်ဒိုဝယ်နိုင်တယ်ဆရာရေ... ခုတော့ ဈေးတွေ တက်သွားလိုက်တာ.... အံ့မခန်းပဲ...
Many thanks. Really appreciate it. Kindly allow me to share it.
အိမ် - ဟင်း
Thant Sin said...
How about part -2?
ကျွန်တော် ဟိုမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဂျာနယ်တွေအတွက် ဆောင်းပါးတွေ ရေးပေးနေရတာရယ်။ အရေးပေါ်လက်စွဲစာအုပ်ကို နှစ်မကူးခင် ထုတ်ချင်လို့ တက်သုတ်ရိုက်ရေးနေတာရယ်။ ထုတ်ဝေတဲ့ဆရာကလည်း ရေခဲသေတ္တာနဲ့ လေအေးစက်အကြောင်း စာအုပ် ရေးဘို့တောင်းဆိုနေလို့ ရေးနေရတာရယ်၊ ပရဟိတကိစ္စတွေအတွက် ရှုပ်နေတာရယ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အိမ်ဝယ်ခြင်း အကြောင်း ဒုတိယပိုင်းကို တန်းလန်းကြီးရပ်ထားရတာ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။
အခု မဂ္ဂဇင်းကိစ္စတွေ ပြီးသွားပြီမို့လို့ အိမ်ကိစ္စ ဆက်ပါမယ်။ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
Than Chaung said...
Do you know whether an S-pass holder is eligible to buy an HDB flat in Singapore or not?
မရပါဘူးခင်ဗျား။ PR မှ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ မှာရေးထားတဲ့ အိမ်ဝယ်ခြင်း အသေးစိတ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး လာဖတ်တာပါ စာဖတ်ပဲ တတ်ပါတယ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ မသင်ခဲ့မိတာ ဒီည သိသွားပါပြီ မြန်မာစာ ဖတ်တတ်ရုံနဲ့ ဆရာ စေတနာနဲ့ ရေးတာမှန်းသိပါတယ် အများကြီး ကျန်းမာပြီး ဒီထက်မက ရေးနိုင်ပါစေ မလေးရှား စံတော်ချိန် မနက်လေးနာရီခွဲပြီ အိပ်တော့မယ် မနက်ကျရင် စားပွဲ ထိုးရအုံးမယ် နားရက်တိုင်း လာဖတ်မယ်